Naya Bikalpa | » यो सामान्यतया कम्युनिष्ट चरित्रको संगठन नै होइन, विशेषतः विश्वव्यापी रुपमा यस्तो अभ्यास नै हुँदैन यो सामान्यतया कम्युनिष्ट चरित्रको संगठन नै होइन, विशेषतः विश्वव्यापी रुपमा यस्तो अभ्यास नै हुँदैन – Naya Bikalpa
यो सामान्यतया कम्युनिष्ट चरित्रको संगठन नै होइन, विशेषतः विश्वव्यापी रुपमा यस्तो अभ्यास नै हुँदैन
प्रकाशित मिती: २०७६ जेष्ठ १४, ०७: ३८: ५८
यतिबेला छिमेकी राष्ट्र भारतमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । आमनिर्वाचन सम्पन्न भइरहँदा यसभन्दा अगाडिको पार्टी भारतीय जनता पार्टीलेनै बहुमत प्राप्त भएकोले भाजपाकै सरकार बन्ने पक्का छ । गठबन्धन भाजपाले दुइतिहाइ ल्याउन सफल नरेन्द्र मोदी नेतृत्वले पुनः सरकार बनाउने भएपछि नेपालमा विभिन्न खाले प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् ।
हिन्दुवादीहरुको बाहुल्यता भएको पार्टी भाजपाले भारतमा सरकार बनाइरहँदा नेपालमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी हिन्दुहरुको बाहुल्यता भएको नेपालीहरुमा कौतुहलता नहुने कुरै भएन । त्यसैले यस पटक हामीले भारतको आमनिर्वाचनको समिक्षा गर्दै नेपालको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा राजनीतिक विश्लेषक एवं प्रष्ट वक्ता सुरेन्द्र के.सी.सँग नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः
यतिबेला भारतको आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, निर्वाचन सम्पन्न भइरहँदा पुनः भारतीय जनता पार्टीनै बहुमतमा आएको देखिन्छ, त्यसकारण नरेन्द्र मोदीनै फेरी भारतीय प्रधानमन्त्री दोहोरिदा नेपाललाई के–कस्तो प्रभाव पर्ला ?
मैले देख्दा त्यस्तो धेरै फरक र प्रभाव पर्लाजस्तो लाग्दैन । तर यहाँका मानिसहरु चाँही भारतको आम निर्वाचनपछि उल्लेख्य प्रभाव पर्छ, फरक पर्छ भन्ने आशंकाको बीचमा रहेको मैले पाएँ ।
त्यसोभए के कारणले उल्लेखनीय फरक र प्रभाव पार्छ भनिरहेका होलान् त यहाँलाई के लाग्छ ?
भारतीय जनता पार्टीको विजयको पछाडी हिन्दुत्व र राजसंस्थामुखी सोंचाइ भएका नेताहरुको पनि बाहुल्यता छ भन्ने रहेको छ ।
ती एजेण्डाहरु भारतमा पनि प्रचुरमात्रामा रहेको मनोविज्ञान यहाँ बनिरहेको अवस्था छ । त्यसको सापेक्षतामा मोदीको विजयले फरक पर्छ र नेपालको राजनीतिमा कुनै न कुनै अन्तर आउँछ भन्ने मनोविज्ञान हो । मैले पहिलेदेखीनै भन्दै आएको छु की नीतिगत रुपमा भिन्नता ठुला राष्ट्रहरुमा हुँदैन । त्यसैले पनि ठुला नेताको विजयले फरक पार्दैन भन्ने कुरा पनि रहेको छु । एस.डी. मुनीको प्रतिक्रिया केहीदिन अघि यहाँ उदृत गरिएको थियो । उनले चाँही कुनै न कुनै फरक पर्ने यसको दबाब जाने भन्ने खालको मनसाय त्यहाँबाट व्यक्त भइरहेको छ ।
निर्वाचनकै क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसपाली नेपाल नीतिमा केही फरक पर्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ नि तपाईलाई के लाग्छ ?
हो, त्यो कुरालाई यहाँका पत्रकारहरुले उदाहरणमा लिइराखेका छन् । उनको शक्ति हुँदाहुँदै अहिलेको संविधान जारी भएको छ र डरलाग्दो नाकाबन्दीकोबीच पनि त्यसलाई पन्छाएर नेपालको राजनीति यहाँ आइपुगेको छ । त्यसकारण आवश्यकता के छ भने यी सबै परिदृश्यलाई कसरी संस्थागत र स्थायी बनाउने दुई देशकाबीचको शु–सम्बन्धलाई प्रगाढ र विश्वसनिय बनाउने भन्ने नै हो ।
त्यो खालको आचरण भएर गयो भने हामीले भन्नपर्ने कुरा त्यस्तो केही पनि रहँदैन । तर जुन मनोरोगको कुरा मैले नेपालको अर्थ राजनीति जगतमा सदा उल्लेख गरी आएको छु त्यही मनोरोगले हाम्रो दुई देशको सम्बन्धमा जहिले पनि दरार ल्याइराखेको छ । अब यो दरारलाई कसरी समाधान गर्ने र उत्पन्न भएका कतिपय राजनीतिक विमतीहरु जे–जति छन् नेपालमा अहिलेको शासकीय शैलीलाई लिएर जुन किसिमको विषयभाव नेपाली समाजमा छ, त्यसलाई कसरी हेर्ने, व्यवस्थापन गर्ने यो चाँही मोदी सरकारले नेपालप्रतिको नयाँ विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
यसभन्दा अगाडिको निर्वाचनपछि भाजपा पार्टीको नेतृत्वबाट नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचन पश्चात् चार पटक नेपाल भ्रमण गरेका कारण मोदीको नेपालप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण अरुभन्दा फरक देखिन्छ होइन र ?
तर तात्विक परिणामदायी बनेन् । एउटा भ्रमण उहाँले जनकपुरबाट गर्नुभयो, त्यो पनि किन क्षेत्रीयबाट भन्ने भयो र विवादमै आयो । जसरी मुस्ताङको भ्रमण गर्नुभयो त्यो पनि धार्मीक दृष्टिकोणले उपयुक्त होइन भन्ने कुरा आयो । अरु भ्रमणहरुले पनि खासै परिणाम दिएनन् । हामीलाई चाहिएको परिणाम परिणाम र तात्विक भिन्नता हो ।
भारतीय जनता पार्टी आएपछि पुरानो नेपाल नीतिमा बदलाव आउँछ, जुन चाँही पहिलो निर्वाचनका अभियन्ता मोदी आफैले काँग्रेसको विदेश नीति अन्तर्गत नेपाल नीति असफल भयो, त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्छौ भन्नुभएको थियो । तर व्यवहार झन् खराब नाकाबन्दी समेत हामीले व्यहोनुप¥यो । यसलाई फेरी कसरी कहिल्यै नदोहोरीने बनाउने हो आजको प्रश्न यो हो । त्यसैले मोदीजस्तो व्यक्तिले नेपालको भ्रमण गर्दा तात्विक फरक पर्नुपर्छ ।
त्यतिबेलाको नाकाबन्दीलाई बिर्सिएर नयाँ ढङ्गबाट जानुपर्छ भन्ने नयाँ दिल्लीको निश्कर्षलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
हाम्रो शरीरमा घाउ छ, दुख्छ त्यसैले हाम्रो आत्म निर्वलता पनि कमजोर छ । हाम्रा नेताहरु पनि परावलम्बी छन् । परामुखपेक्षी छन् । यस्तो नेतृत्व र यस्तो छिमेकीकाबीचमा हामी कसरी आफुलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्ने चिन्ता आमनेपाली जनतालाई छ । यो कुरा उहाँहरुले बुझिदिनुपर्छ ।
म पनि भारत भ्रमण गर्छु, भारतीय नेताहरुसँग कुराकानी गर्छु, पत्रपत्रिका लेख्छु, त्यो लेख्दाखेरी नेपालमा पनि पचास प्रतिशत मानिसहरु भारतीय स्वार्थबाट उत्प्रेरित भएको पाउँछु । यसले गर्दा बदनामी बढेर जान्छ । यो नगरौं । सहभावले काम गरौं । एक अर्काको समस्या र अस्तित्वलाई मानौं, बुझौ भन्ने कुरा हो र हामीले त भारतलाई ठुलो अभिभावकको रुपमा लिएका छौं । यसको मतलव यो होइन कि हामी भारतको अँग हो भन्ने कुरा कहिल्यै पनि हुँदैन । यो संस्कृति हामीले दिन सकेनौं । आजको चुनौति यो हो भन्ने मेरो व्याख्या हो ।
त्यसोभए अब नरेन्द्र मोदीले नेपाल नीतिमा कठोर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईको बुझाइ हो ?
हाम्रो प्रश्न त्यो हो । त्यो प्रश्नलाई कसरी अब नयाँ नेतृत्व नयाँ सरकारले अथवा नयाँ आएका मोदीले पुनरावलोकन गर्ने हो भन्ने हो । यदि हिन्दु धर्मकै कुरा हो भनेपनि यसलाई प्रस्तुतका साथ नेपाली नेतृत्वकाबीच राखिएको भए नाकाबन्दी लगायतको आजको अविश्वासको स्थिति आउने थियो भन्ने मलाई लाग्दैन र पहिलो चोटी उहाँले प्रधानमन्त्रीत्व लिइसकेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा क्रमबद्धता आउथ्यो र अविश्वासको वातावरण टुट्यो ।
जनता–जनताको सहकार्यको प्रश्न हो भने आज बौद्धिक–बौद्धिकले सरकारका नेताहरुले, अधिकारीहरुले कसरी देशको डिलिङ्ग गर्छ भन्ने कुरा गौण हो । जनमानसमा विषयहरु के कसरी गइराखेका छन् भन्ने कुरा प्रमुख हो । त्यो तिर भारतीय नेतृत्वले कहिल्यै पनि सोंचेन । यद्यपि चाइनिज नेतृत्वले पनि यो सोचेन । मैले अघि पनि भने अभिव्यक्ति आजको प्रश्न होइन ।
आचरण र व्यवहार आजको प्रश्न हो । जनमानसमा अनुभुती के छ यदि त्यो नै सत्य हो भने कुनै न कुनै रुपमा पुरानो प्रवृत्ति र हिन्दुत्वको भावलाई भारतको एउटा न एउटा तहबाट लगातार ढाप दिएकोनै भन्ने सन्देशहरु नेपालमा आइरहन्छन् । ती परिदृश्यहरु किन बनेका छन् भन्ने कुरा हो । मलाई लागेको के हो भने अन्यौल र अस्थिरतालाई नेपालमा हुन दिएर खाली रहेको ठाउँमा खेल्ने मनोविज्ञान चाँही शक्ति राष्ट्रहरुको सदाकाल रहेर आएको छ । किनभने यता हाम्रो नेतृत्व दुर्वल चरित्रको छ । सत्ता पायो भने जे पनि भन्छ । सत्ता पाएन भने उ जे पनि गर्छ ।
नाकाबन्दीको बेला ओलीको भाषण सबैले सुनेकै छौं होला, अब अहिले उहाँको शासन पनि सुन्नुभएकै होला । यसले गर्दा हामीमा चाँही एउटा अन्यौलता र अस्थिरता छाइरह्यो । कहिल्यै पनि नेपाल नीति प्रस्ट हुन सकेन । कि त्यताबाट एउटा बाटो दिनुप¥यो की यो तरिकाले जानु हुन्छ भन्ने कुरा क्लियरकट आउनुप¥यो होइन भने नेता–नेतासँग खेल्ने, जनता–जनतासँग खेल्ने, समुदाय–समुदायसँग खेल्ने भएबाट चाँही हामीले स्थायित्व पाएनौं ।
हामी समृद्धिमा गएनौं, हाम्रा युवाहरुले धेरै दुःख पाएको कुरा बताउँछन् । सिमानामा उनीहरु लुटिनु, पिटिनुपर्छ । सि.आर.पीको तकलिफ हुन्छ । डिमोनिटाइजेसनले हाम्रो अर्बौ रुपैयाँ भुस भएर गयो । कही पनि हेरिएन हामीलाई यसले गर्दा नेपाल–भारत सम्बन्ध धमिलिएको र संग्लो हुने मौका नपाएको र यसलाई संग्ल्याउ भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो ।
नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच नेपाली नीतिमा नयाँ सहमती होला ?
त्यो चाँही म सम्भव देख्दिन भन्दा अत्यन्तै सङ्किर्ण स्वार्थी छ, यहाँको नेतृत्व । एउटा उदाहरण साथीहरुले मलाई भनिरहेका थिए कि टप लेभलको एउटा भिजिट थियो भारतमा नेपालको एउटा मन्त्रीले चाँही एकान्तमा भेट्छु भनेको भनै ग¥यो अरे, अनि एकान्तमा एक्लै भेट्न पाउने चलन रहेनछ डिप्लोमेसीमा त्यस्तो मिल्दैन भन्दाभन्दै पनि जोड गरेपछि अन्तिममा एकान्तमा भेट्ने कुरा भयो र एकान्तमा भेट्ने कुरा भएपछि त्यहाँको अथोरिटिले चाँही यहाँको अथोरिटिलाई कन्भिन्स गर्दियो कि त्यसले के कुरा भन्यो भन्दाखेरी एक सिट माग रहेथा भन्थ्यो रे ।
एउटा सिटको लागि नेपालका नेताहरु खुट्टा कमाउँछन् । एकजना प्रधानमन्त्री बाहेक आजसम्म नेपालका कमसेकम पच्चिस जना प्रधानमन्त्री भए होलान् प्रजातन्त्रमा ती पच्चिस जना नेतामध्ये एक जनाले मात्रै राष्ट्रको कुरा गरेको छ, बाँकी सबैले व्यक्तिको कुरा गरेको छ भन्ने चाँही भारतीय पक्षको कुराहरु छन् । ती एकजना नेता चाँही कृष्ण प्रसाद भट्टराई होकी भन्ने छ । किनभने व्यक्तिगत कुरा कृष्ण प्रसाद भट्टराइको लागि कहिल्यै पनि विषय बनेको थिएन ।
अरु जम्मै चाँही व्यक्तिगत कुरा, स्वार्थको कुरा, आफ्नो सत्ता के हुन्छ भन्ने कुरा यो खालको नेपालको नेतृत्वले गर्दा नेपाल–भारत सम्बन्धमा दरार पैदा भइरहन्छ । मैले यहाँ बुद्धिजिवीहरुको बीचमा कुरा राख्न खोजे केही वर्ष अगाडि एउटा पेपर लेख्नको लागि मलाई भनियो, म लेख्नको लागि अगाडि बढे र यिनै कुराहरु मैले त्यो पेपरमा समेट्दा आयोजकहरुको जुन समुह थियो, त्यो समुहले यो प्रकारले लेख्ने होइन भन्ने खालको विषय ग¥यो । अनि मैले त्यसमा अड्डि लिए र यो भन्दा बढी मबाट हुन सक्दैन । म त नेपाल–भारत शु–सम्बन्धको प्रगाढता चाहन्छु । तर अविश्वासको जगमा त्यो सम्बन्ध बन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
मेरो पोजिसन यही हो भने आँखिरी त्यो कार्यक्रमनै हुन सकेन । तिनीहरुनै अहिले नेपालमा सबभन्दा ठुलो राष्ट्रियताको जग र कुरा गरेर हिँडेको सुन्छु र त्यो सुन्दा मलाई हाँसो उठ्छ । यो कुरा त भारतीय नेतृत्वलाई पनि थाहा छ नि । नेपाली नेतृत्व, नेपाली बौद्धिकता, नेपाली मिडियाको चरित्र थाहा छैन र उनीहरुलाई ? हो यसले गर्दा हाम्रो दुई देशको सम्बन्धमा दरार परेको छ । नरेन्द्र मोदीलाई मेरो अनुरोध छ ।
भारतीय दुतावासलाई मेरो अनुरोध छ, त्यस किसिमको काम गर्ने साथीहरुलाई मेरो अनुरोध छ की यो दरारलाई नपाल्नु यसले दुवै पक्षलाई राम्रो गर्दैन । यो नै पुनरावलोकनको करिडोर भएको हुँदा यो जगबाट नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकाललाई प्रयोग गर्नुभयो भने हामी नरेन्द्र मोदीको जयजयकार गाउँछौं । नरेन्द्र मोदीप्रति त्यस्तो खास हाम्रो भेदभाद केही पनि होइन । भारतप्रति पनि हाम्रो भेदभाव केही पनि होइन ।
तर हामी अत्यन्तै पुरानो मुलुक हौं । हाम्रो स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको पनि गौरब छ । यसको व्यवस्थापन हाम्रो नेतृत्वको कारणले नरेन्द्र मोदी विदेशीलाई दोष लगाउन चाहन्न । हाम्रै नेताहरुको छोरोछोरी मुखी स्वभावले आजको दिन आइराखेको हो । सम्बन्धमा एउटा अग्रता चाहिन्छ । स्वार्थको जगमा कुनैपनि सम्बन्ध बलियो बन्न सक्दैन । यो नरेन्द्र मोदीले सोचिदिनुभयो भने ठुलो एउटा विषय र युगान्तकारी कुरा हुन्छ ।
कसरी सोचेको छ, त्यहाँको बौद्धिकले सोही दिन अघि एस.डी. मुनीको कुरा सुन्दाखेरी त उहाँहरु अहिले पनि पौने पट्टि हुुनुहुन्छ भन्ने छ । त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई राम्रो आयाम दिन्छ भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्दैन ।
यदि प्रचण्डलाई केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बनाउनु भएन भने उहाँ युटर्न हुनुहुन्छ भनेर तपाईले पहिले पनि संकेत गर्नुभएको थियो के त्यो कुरा सहि हो ?
त्यो कुरा पक्कै पनि सही हो । किनभने नेपालको राजनीति मुलतः सत्तामा केन्द्रित छ, सत्ताको लागि जे पनि गर्ने यहाँको नेतृत्व छ । त्यो जे पनि अन्तर्गत नेकपाको निर्माण भएको छ । यो अपारदर्शी र रहस्यपूर्ण छ । यो परिणाम दायी हुन्न । परिणामदायी भएपनि देश र जनताको पक्षमा जाँदैन ।
यो नेताहरुको खेल मात्रै हो भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो र त्यो पोजिसन मेरो अहिले पनि कायमै छ । अढाई वर्षभित्र केपी ओलीले छुट्टी लिनुभएन भने फेरी यो पार्टी पुनः एकाएक हुन्छ । दुवैका पार्टी कार्यालय र संयन्त्रहरु यथावत् छन् । दुबै पार्टी अध्यक्षहरु पनि यथावत् नै छन् । यो सामान्यतया कम्युनिष्ट चरित्रको संगठन नै होइन । विशेषतया विश्वव्यापी रुपमा यस्तो अभ्यास नै हुँदैन ।
अब यसले पनि मेरो तर्कलाई बल दिन्छ र कुनै पनि बेला यो टुट्न सक्छ तर सत्ता साझेदारी भयो भने फेरी यो अर्को वर्ष जान्छ । चुनावको कुरा हुन्छ, फेरी एकताका कुराहरु हुन्छन् । दुर्भाग्य यसले नेपाली जनतालाई कुनैपनि परिणाम दिँदैन ।
नेताहरुको हातको खेलौनाको बन्छ नेपालको राजनीति । मित्र राष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने कुरापनि किनभने भारत र अमेरिकामै कुरा गर्दाखेरी पनि दुइवटै नेताहरुलाई वैकल्पिक रुपमा ढाडस दिइरहेको स्थिति छ । यसले नेपालको राजनीतिलाई घातक असर गर्छ भन्ने कुरा उहाँहरुले हेक्क राख्नु भएको छ कि छैन् त्यो मलाई थाहा भएन । यसले हामीलाई गन्तव्य पनि दिँदैन, समृद्धि पनि आउँदैन । योनै अहिलेको चुनौति हो ।
पछिल्लो समय नेपालको विकास र समृद्धिमा भारतको पनि रुची बढेको पाइन्छ नि यहाँलाई के लाछ ?
आन्तरीक रुपमा हामी त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्षम छौं की छैनौं । सँगसँगै अमेरिकाले नेपालको विमानस्थल सुरक्षा व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ, चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेपालको सडक व्यवस्था कस्तो छ मलाई भन्दा बढी तपाईलाईनै थाहा छ ।
किनभन तपाई गाडी चढ्नुहुन्छ, म पैदल हिँड्छु । के कारणले सडक बनिरहेको छैन, त्यो थाहा छ यदि तपाई दिल्ली हुनुहुन्छ भने दिल्ली कस्तो छ, त्यो पनि थाहानै होला । हामी तुलनीय मुलुकनै रहेनौं । हामीले कुनैपनि क्षेत्रमा भरपर्दो सु–साशनको संकेत दिन सकेनौं । नेतृत्व पनि कमजोर भयो । मेलम्चीको कुरा गर्दा अब सरकारले ठेक्कामा जाने निर्णय ग¥यो भन्ने छ । तीन प्रतिशत काम हुन बाँकी थियो र ३६ करोडको लेनदेन थियो ।
सिएमसीसँग त्यो दिन नमान्दा आज साँढे २ अरबको नयाँ ठेक्का गर्नुपर्ने ठाउँ आइपुग्यो । यसको लागि कोही पनि कारवाहको दायरामा आएन । यस्तो नेतृत्व र कार्यशैली भएको ठाउँमा न पर्यटन, न धर्म, न व्यवस्था, न सुशासन, न समृद्धि केहीपनि चुनौतिपूर्ण हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
हातको खेलौनाको बन्छ नेपालको राजनीति । मित्र राष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने कुरापनि किनभने भारत र अमेरिकामै कुरा गर्दाखेरी पनि दुइवटै नेताहरुलाई वैकल्पिक रुपमा ढाडस दिइरहेको स्थिति छ । यसले नेपालको राजनीतिलाई घातक असर गर्छ भन्ने कुरा उहाँहरुले हेक्क राख्नु भएको छ कि छैन् त्यो मलाई थाहा भएन । यसले हामीलाई गन्तव्य पनि दिँदैन, समृद्धि पनि आउँदैन । योनै अहिलेको चुनौति हो ।
आन्तरीक रुपमा हामी त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्षम छौं की छैनौं । सँगसँगै अमेरिकाले नेपालको विमानस्थल सुरक्षा व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ, चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेपालको सडक व्यवस्था कस्तो छ मलाई भन्दा बढी तपाईलाईनै थाहा छ । किनभन तपाई गाडी चढ्नुहुन्छ, म पैदल हिँड्छु । के कारणले सडक बनिरहेको छैन, त्यो थाहा छ यदि तपाई दिल्ली हुनुहुन्छ भने दिल्ली कस्तो छ, त्यो पनि थाहानै होला । हामी तुलनीय मुलुकनै रहेनौं ।
हामीले कुनैपनि क्षेत्रमा भरपर्दो सु–साशनको संकेत दिन सकेनौं । नेतृत्व पनि कमजोर भयो । मेलम्चीको कुरा गर्दा अब सरकारले ठेक्कामा जाने निर्णय ग¥यो भन्ने छ । तीन प्रतिशत काम हुन बाँकी थियो र ३६ करोडको लेनदेन थियो । सिएमसीसँग त्यो दिन नमान्दा आज साँढे २ अरबको नयाँ ठेक्का गर्नुपर्ने ठाउँ आइपुग्यो ।
यसको लागि कोही पनि कारवाहको दायरामा आएन । यस्तो नेतृत्व र कार्यशैली भएको ठाउँमा न पर्यटन, न धर्म, न व्यवस्था, न सुशासन, न समृद्धि केहीपनि चुनौतिपूर्ण हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
२०७६ जेष्ठ १४, ०७: ३८: ५८